घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू नाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरू भिक्टर ओसिम्हेन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Inanutshell, we give you the history ofaNigerian Football Genius with the name “विक“. Lifebogger begins from his early days, to when he became famous. To give youataste of the engaging nature of Victor Osimhen’s Bio, here isapictorial summary of his life.
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक हो एक आँखा संग सर्वोच्च प्रतिभाशाली स्ट्राइकर सुन्दर गोल स्कोर गर्न को लागी। यद्यपि केवल थोरैले भिक्टर ओसिम्हेनको जीवनीलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
सुरूवात गर्दै, उनका पूरा नामहरू भिक्टर जेम्स ओसिम्हेन हुन्। भिक्टर ओसिम्हेन जसरी उनी बोलाउँथे उहाँ नै जन्म भएको थियो डिसेम्बर 29th दिन 1998 आफ्नो दिवंगत आमा र बुबा, एल्डर पैट्रिक Osimhen लाई लागोस, नाइजेरियाको शहरमा। उहाँ आफ्ना प्यारा आमा बुबामा जन्मेका छ जना छोराछोरीमध्ये अन्तिम हुनुहुन्थ्यो।
भिक्टरका अभिभावकको पारिवारिक उत्पत्ति दक्षिणी नाइजेरियाबाट भएको हो, वास्तवमै ईजान दक्षिण पूर्वी स्थानीय सरकार नाइजेरियाको ईडो स्टेटको। उनको परिवार थर जो "ओसीमहेन”को अर्थभगवान राम्रो हुनुहुन्छ'नेटिभ ईशान बोलीमा।
दक्षिणी नाइजेरियाका धेरै उल्लेखनीय फुटबलरहरू जस्तै, भिक्टर ओसिम्हेन एक गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। उनको जन्म हुनु अघि उनका आमाबुबाले शहर शहरमा बसाई सर्ने निर्णय गरेलागोस"नाइजेरियाको आर्थिक राजधानी। लागोसमा छँदा पनि परिवारले कठिनाइको सामना गर्नुप .्यो, एउटा बच्चाले त्यतिखेर बच्चाको सानो टोलीलाई लागोस ट्राफिकमा बल्दै गरेको घामको सामना गर्नु पर्‍यो जहाँ आमाले आफ्नो ब्यापार आम्दानीको लागि पानीको बिक्री गर्नुहुन्थ्यो।
भिक्टर ओसिम्हेन आफ्ना भाइ एन्ड्र्यू र4अन्य भाइबहिनीहरूसँग Olusosun मा हुर्किए, ओरेगुन, इकेजा, लागोस वरिपरिको सानो समुदाय। यो समुदायले अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो डम्पसाइटहरू मध्ये एकलाई समावेश गर्दछ। आफ्नो संरचनात्मक वर्षहरूमा हुर्केका भिक्टर ओसीमहेनले शिक्षा र परिवारको अस्तित्वको लागि पैसा जुटाउन सडकमा पानीको पानी र अन्य घरेलु चीजबीजहरू बनाए र होक गरे। (TheNationOnlineng रिपोर्टहरू)।
Olusosun प्राथमिक स्कूल जुन उनले भाग लिएका थिए स्कूलका सबै छात्र र समुदायका युवाहरूको लागि फुटबल बैठक पोइन्टको रूपमा।
हरेक साँझ, भिक्टर सहित धेरै केटाहरू फुटबल मैदानमा जान्छन् उसको जेठो दाइ जो समुदायमा एक स्थानीय फुटबल स्टार थियो। उनको परिवारको पहिलो जन्म जसको नाम एन्ड्र्यू छ उनले भिक्टर र उनका अन्य भाइबहिनीहरूको हेरचाह गर्न पैसा कमाउनको लागि शिक्षा त्यागे।
सहयोगी हाकिking, भिक्टरले आफ्नो जेठो भाइ, एन्ड्र्यूलाई धन्यवाद दिँदै फुटबल खेल्न पनि सिके। उनी चेल्सी एफसीको बारेमा पनि उत्साहित थिए किनकि उसले दृश्य केन्द्रहरूमा टोलीको खेल देख्यो। उहाँसँगै उनका परिवारका सदस्यहरू नाइजेरियाली टोली (सुपर ईगल्स) को प्रशंसक थिए। टोलीका लागि समर्थन सँगै खेल खेल्ने उनको उत्कटताका साथ एक पेशेवर बन्ने चाहना सिर्जना भयो।
आफ्नो सानो भाइ बढी प्रतिभाशाली भएको देखेर एन्ड्र्यूले आफ्नो अखबारको व्यवसायको सामना गर्न खेल त्याग्नुपर्‍यो। उनले आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउने विचारलाई पनि फ्याँकिदिए जसले गर्दा उसले आफ्नो सानो भाइलाई सहयोग पुर्‍याउन पैसा जुटाउन सकीन्छ जसलाई उसले सुपरस्टारको रूपमा देखायो।
स्थानीय फुटबल स्काउट्सले भिक्टरको बारेमा केहि विशेष देखेकोले पछि उनलाई लागोसको अल्टिमेट स्ट्राइकर एकेडेमीमा आमन्त्रित गर्यो जहाँ उनले आफ्नो पहिलो सफल परीक्षण पाएका थिए।
२०१ 2014 मा, भिक्टर ओसिम्हेनको प्रदर्शनले अन्तिम स्ट्राइकरहरूको साथ उनलाई कोकले आमन्त्रित गरेको देख्योh Amuneke उनको देश U-17 टीम प्रतिनिधित्व गर्न। नोट: नाइजेरियाको राष्ट्रिय U-17 फुटबल टीम गोल्डन ईगलेटको रूपमा चिनिन्छ, सबैभन्दा कान्छो टोली हो जसले फुटबलमा नाइजेरियाको देश प्रतिनिधित्व गर्दछ। भिक्टर ओसिम्हेनले टीमलाई क्वालिफाइ गर्न सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍यायो U-17 FIFA World Cup जो चिलीमा आयोजित थियो।
2015 FIFA U-17 प्रतियोगिता: विजेता ओसीमहेनले टूर्नामेन्टमा राम्रो शुरुआत गरेका थिए किनकि उनले यस डेब्यूमा दुई ठूला गोलहरू बनाए, शव्दको वरिपरि युरोपेली स्काउट सहित लाखौंको हृदय जिते। ओसीमहेन नाइजेरियाको यु -१ success सफलताको लागि चिलीमा भएको फिफा वर्ल्ड कपमा निर्णायक थिए। प्रतिस्पर्धा जित्न आफ्नो देशलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रतिभाशाली नाइजेरियालीले १० गोल गरेपछि फिफा यू -१-वर्ल्ड कप सिल्वर बल पनि सर्वाधिक गोल गर्ने पुरस्कार पाए।
विश्वकप पछि, यो कुरा थाहा पाए कि युरोपका ठूला क्लबहरू, आर्सेनल, मन शहर, र टोटेनहम हटस्पुरका सेवाहरू पछि उनको सेवामा लागेका थिए। आश्चर्यजनक रूपमा, भिक्टर ओसिम्हेनले सबै प्रस्तावहरू अस्वीकार गरे किनभने अर्को मध्यम-वजन क्लबले उनलाई सबैभन्दा ठूलो पैसा प्रस्ताव गरेको थियो।
जनवरी २०१ 2015 मा अबुजास्थित सीएएफ अवार्डमा उनलाई २०१ African अफ्रिकी युवा खिलाडी अफ द इयर घोषित गरे पछाडि ओसिम्हेनले विश्व बुन्नेसलिगा क्लब, वुल्फ्सबर्गसँग आफ्नो पेसागत पेसा बनाउने घोषणा गरे। उनको अनुसार, क्लबको आश्वासन प्लस मनिस उनको परिवारका लागि मनोबल बढावा थियो र उनी युरोपमा कुनै पनि माथि जर्मन क्लबको लागि खेल्न रुचाउँदछन्।
जर्मनीमा पीडा: ओसीमहेनले जून 2020 सम्म साढेतीन वर्षको पूर्व सम्झौता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र मे 2017 मा जर्मन शीर्ष उडानमा आफ्नो शुरुवात गरे। चार महिना पछि बुन्डेशलिगा पदार्पण गरे पछि, नाइजेरियालीहरूले समस्याहरू निम्त्याउन थाले। एउटा काँधमा चोट लागेर उनलाई शल्यक्रियामा पुर्‍यायो जसले उनको पहिलो सत्रमा समय भन्दा पहिले नै समाप्त भयो। यस खराब तहमा समाप्त गर्दै, भिक्टर ओसिम्हेन (तल चित्रमा) शीर्ष क्लबले यति धेरै बजार बन्न सकेन।
ओसिमहेन दुःस्वप्नहरु उनको काँधमा चोट बाट आफ्नो स्वास्थ्य लाभ पछि जारी। यस पटक, यो बिरामी परेको थियो जसले उनलाई पूर्व मौसममा मिस गर्यो र सबैभन्दा कष्टकर, नाइजेरियाको २०१ 2018 वर्ल्ड कप छनौटमा हराइरहेको थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनी रूस 2018 FIFA World Cup को समयमा अस्पतालमा थिए।
यसले ओसिमहेनलाई2दर्दनाक asonsतुहरूको बारेमा लिन खोज्यो जुन उसको सपनाहरू बाट बाहिर आयो। चोटपटक र बिरामीताको कारण असंगतिले उनलाई वुल्फ्सबर्गमा शून्य (0) गोल गर्दै गरेको देखी प्रक्रियामा उसको करियर बर्बाद गरेको थियो।
यस क्रममा ओसिमहेनले बेल्जियमका क्लब जुल्ते वारेगेम र क्लब ब्रुगसँग समर ट्रायलमा भाग लिने विचार गरे जो त्यस समयमा शासनकालका विजेता थिए। फेरि, उनको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्यो र उनी औलोबाट बिरामी परे जसले उसको शारीरिक अवस्थालाई असर गर्यो र दुबै क्लबले उनलाई अस्वीकार गर्यो।
22 मा अगस्त 2018 मिति थियो फुटबलका देवताहरू उनीमाथि दया थियो। यो त्यो दिन थियो बेल्जियम क्लब चार्लेरोइले एक longतु लामो loanण सम्झौतामा उहाँलाई स्वीकार गर्‍यो। भिक्टर ओसीमहेनले २२ सेप्टेम्बरमा ब्याकहेलको साथ पेशेवरको रूपमा पहिलो गोल गर्दै पहिलो चरणको सुरुवात गरे। खेल पछि, ओसिम्हेनले भन्यो बीबीसी स्पोर्ट त्यो उसले थियो कि "यति लामो पर्खाइ पछि फेरि उनको खुशी भेटियो"।
बिरामी नाइजेरियनको बेल्जियमको पक्षसँग सफल जादू थियो, एक्सएनयूएमएक्स खेल खेल्दै र एक्सएनयूएमएक्स गोल गर्ने, एउटा यस्तो उपलब्धि जसले उसको क्लब, चार्लेरोइ, acquireणमा हुँदा उसलाई प्राप्त गर्ने विकल्प सक्रिय गर्‍यो। बेल्जियममा फुटबलमाथि प्रभुत्व जमाएपछि, नाइजेरियाली आफ्नो अग्रगामी अफ्रिकी स्ट्राइकरको रूपमा आफ्नो फिर्ता चढ्न ठीक समय भएको महसुस गरे जुन उनी पहिले थिए। जुलाई 36 मा, उनले लिल OSC का लागि हस्ताक्षर गरेर आफ्नो क्यारियर मा एक माथिका चाल बनाए।
काँधमा चोटपटक र मलेरियाको कारण टुक्रिनुको सट्टा नाइजेरियाली स्ट्राइकर एक शक्तिबाट अर्को ताकतमा बढ्न थाले। फेरि, फुटबलको सबैभन्दा लोकप्रिय गुण अफ्रिका। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
युरोपमा उनको ख्याति बढ्दै जाँदा यो निश्चित छ कि धेरै प्रशंसकहरूले भिक्टर ओसिम्हेनको लेखनको समयमा प्रेमिका छ कि छैन भनेर सोधपुछ गरेका थिए।
सुन्दरता, वफादारी, कडा परिश्रम र नम्रता सहित ओसिम्हेनका मनमोहक गुणहरूले महिलालाई आफू अझ राम्रो प्रेमी बनाउने कुरामा विश्वास गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै ठाउँ छैन।
प्रख्यात हुनु अघि, यो आरोप लगाइएको थियो कि ओशिमिन एक प्यारी केटीलाई डेट गर्छिन् जसले आशिषको नाममा जान्छ। उनीहरूको सम्बन्धको अवधिमा दुबै प्रेमीहरूले नियमित रूपमा इन्स्टाग्राममा एक अर्काको तस्बिर साझेदारी गरे. ओसीमहेनको कथित सम्बन्ध उनकी प्रेमिकासँग करीव २ बर्ष सार्वजनिक गरियो जब कि उसले उनीहरुको सोशल मिडिया ह्यान्डलहरुबाट उनीहरुको ट्रेस मेटाउने निर्णय गर्‍यो।
उनको सोशल मिडियामा उनको जानकारी मिटाए पछि, अफवाहहरु रहिरह्यो, जसले दाबी गर्‍यो कि आशिष ओसिमहेनकी प्रेमिका थिइनन् तर उनको विवाहित पत्नी। उनको सोशल मिडिया ह्याण्डलको माध्यमबाट जाँच्दै, उनको आरोप लगाइएको विवाह वा ब्रेसि toसँगको विवाहको बारेमा कुनै जानकारी छैन। यद्यपि यो अझै सम्भव छ कि ऊ उनीसँग बिहे गर्न सक्छ तर उसले सार्वजनिक नगर्न रुचायो।
लेख्ने समयमा जस्तै ओसिम्हेन अविवाहित देखिन्छ र उसले आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचायो भन्दा प्रेमिका खोज्न वा सार्वजनिक सम्बन्ध बनाउनु भन्दा।
भिक्टर ओसिम्हेनलाई चिन्न पाउँदा फुटबलबाट व्यक्तिगत जीवनले तपाईंलाई उसको व्यक्तिको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरुमा, उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले संरक्षण र लगनशीलताको सही अर्थ जान्नुहुन्छ, सन्देश जुन उहाँको Whatsapp प्रोफाइल पिकमा सधैं हुन्छ।
"वुल्फ्सबर्गमा मेरो अवधिमा मेरो बारेमा लेखिएका केहि नकारात्मक टिप्पणीहरू र सामानहरू द्वारा म कुनै तरिकाले व्याकुल भएन।,"। फेरि, उसका यी शब्दहरू द्वारा, तपाईं सजिलैसँग यो एक लडाकू हो भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ।
फुटबलको बाहेक, ओसिम्हेन मनपर्ने अझै बाँकी रहेको समकालीन आर एन्ड बी संगीत सुन्न मन पराउँछन् "मलाई विश्वास छ म उड्न सक्छु", हिट ट्र्याक बालुवा म्यूजिक स्टार द्वारा R Kelly। कहिलेकाँही, उनले आफ्नो लक्ष्य समारोहको समयमा आफ्नै तरिकामा केलीको गीत गाउँछन्। स्थानीय नाइजेरियाली संगीतको क्षेत्रमा ओसीमहेन ओलामाइडसँग टाँसिरहन्छ र नाइजेरियाको हिप-हप कलाकारको उनको मनपर्ने ट्र्याक छ।सिंहासनमा बसेर।
भिक्टर ओसिम्हेन, जो आफ्नो परिवारको रोटी जम्मा गर्ने व्यक्ति हुन् उनी फुटबलको कारण सबै आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो परिवारको पथ निर्माणमा खुशी छन्। उसका परिवारका सबै सदस्यहरू (तल अवलोकन गरिए) जो उसको अन्धकारमय क्षणहरूमा उहाँसँगै उभिरहेका थिए हाल पेशेवर फुटबलले ल्याउने पूर्ण लाभांशको मजा लिइरहेका छन्।
भिक्टर ओसिम्हेन बुबाको बारेमा: पा पैट्रिक ओसिम्हेन भिक्टर ओसिम्हेनको एक्लो जीवित आमा बुबा र जैविक बुबा हो। तिनी एक पटक 2015 सम्म आफ्नो छोराको प्रबन्धक थिए जब उनले नोगा स्पोर्ट्स मैनेजमेन्टका फ्रान्सेन्ट एजेन्ट ओलिवर नूहलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिए।
जब प्याट्रिक ओसिम्हेन आफ्नो छोराको कानुनी अभिभावक थिए, उनी अरू एजेन्टहरूसँग उनको छोरालाई वुल्फ्सबर्गमा स्थानान्तरणबाट पैसा कमाउनलाई बाइपास गर्ने प्रयासमा मुछिएका थिए। यी व्यक्तिहरूको समूहले उनलाई बाइपास गर्ने क्रममा उनको पहिलो छोरा एन्ड्र्यू ओसिम्हेनसँग भिक्टर ओसीमहेनको लागि सम्झौता सम्झौता गर्न रुचायो।
भिक्टर ओसिम्हेनको आमाको बारेमा: रिपोर्टका अनुसार यो भिक्टर ओसिम्हेनको आमा ढिला भएको देखा पर्दछ। नाइजेरियाका स्ट्राइकरले लेख्दाको समयमा उनको आमाको सम्मान उनको तस्वीरमा राखिएको थियो जुन उनको प्रोफाइल छविको रूपमा इन्स्टाग्राम खातामा छ।
विक्टर ओसिम्न्नेन भाई बहन: भिक्टरका कम्तिमा छ जना भाईबहिनी छन् र एन्ड्र्यू ओसिम्हेन आफ्ना सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दा बढी लोकप्रिय छन्। भिक्टर ओसीमहेनको आफ्ना बहिनीहरूको प्रेमको कुनै सीमा छैन। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उसले नोभेम्बर 2015 को वरपर, पुरस्कार जित्ने समय मा एक बच्चा केटीलाई जन्म दिए पछि उनले एक पटक उनको गोल्डन बुट पुरस्कार उनकी बहिनीलाई समर्पित गरे।
लेख्ने समयमा, भिक्टर ओसिम्हेन बजार मूल्य १ 13,00,००० मिल भन्दा माथि छ। । अनुसार मार्केट स्थानान्तरण। उनको सामाजिक मिडिया ह्यान्डल मार्फत अवलोकन गरिए अनुसार, मजदुरमा रहेको यस पैसाले ग्लैमरस जीवनशैलीमा परिणत गर्दछ जुन मुट्ठी भर प्रभावशाली कार, हवेली र कहिलेकाँही, केटीहरूले सजिलै देख्न सक्दछन्।
उसको कडा पालनपोषण र पारिवारिक पृष्ठभूमिमा फर्केर हेर्दा यो निश्चित छ कि ओसिम्हेन राम्ररी जग्गा हुनुपर्दछ र आफ्ना पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर जान्नुपर्दछ।
पारिवारिक विवाद: उनको हस्तान्तरणको पारिवारिक स crisis्कट पछि भिक्टर ओसिम्हेनको भविष्य एक पटक भ्रममा परेको थियो। उसको परिवारका सदस्यहरू एक अर्काको बिरूद्ध थिए जसले कसलाई खेलाडीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ।
अनलाइन रिपोर्टका अनुसार ओसिम्हेन काका माइकलले एक पटक एजेन्टहरूको समूहको नेतृत्व गरेका थिए भने एन्ड्र्यू अर्को समूहको जेठो एरोड। दुबै समूहहरूसँग उनीहरूका एजेन्टहरू थिए जसले हस्तान्तरण मनी र प्लेयरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार अधिकार माथि लडे। पारिवारिक स crisis्कटलाई नयाँ आयाम प्राप्त भयो जब मिडियामा यस्तो खबर पनि आएको थियो कि ओसिमहेनका बुबाले वुल्फ्सबर्गमा खेलाडीको कदमलाई समर्थन गर्न इन्कार गरेकोमा ठगहरूले कुटपिट गरे। यो पछि गलत हुन डि-बन्क गरिएको थियो। यसले परिवारको स took्कट अन्त्य हुनु अघि केहि समय लिए
भाग्यशाली नर्सरी नाइजेरियन क्लब: जनवरी १, २०१ 1 मा, भिक्टर ओसिम्हेन $ को लागि सारियो3,970,225 परम क्लब स्ट्राइकर एकेडेमी, लागोसको स्थानीय क्लबबाट जर्मन क्लब VfL वोल्फ्सबर्ग।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… स्थानान्तरण शुल्क उनलाई एक सबैभन्दा महँगो खेलाडी बनायो अफ्रिका मा एक नर्सरी टीम देखि एक शीर्ष यूरोपीय टीम मा हस्ताक्षर गर्न। यस विनिमय दरको लेखनको रूपमा गणना गर्दै, अल्टिमेट स्ट्राइकर एकेडेमीले भिक्टर ओसिम्हेन स्थानान्तरणबाट 1.4 अरब नाइराको ठूलो रकम कमायो।
किन उनले बेल्जियममा उत्कृष्ट बनाए: धेरै नाइजेरियनहरूले आफ्नो यूरोपीयन क्यारियर बेल्जियमको पहिलो डिभिजन ए मा सुरु गर्न रुचाउँछन्। यो लीग नायजेरियाका फूटबलरहरूका लागि बर्षौंदेखि मक्का भएको छ र यसले भिक्टर ओसीमहेनलाई आफ्नो यूरोपीयन फुटबल सफलता प्रदान गर्‍यो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… नाइजेरियाका पूर्व सुपर इगल कोच लेट स्टीफन केशी जसले वास्तवमा नाइजेरियाली प्रतिभाहरूको प्रस्थानको कारण लेट एक्सएनयूएमएक्समा बेल्जियम भर्नको लागि नेतृत्व गरे। डेनियल अमोकाची, भिक्टर इक्पेबा, आइतवार ओलिसे र एलोय आगू सबैले बेल्जियममा आफ्नो क्यारियर शुरू गरे। नोट: यो बेल्जियम सेलेस्टाइनमा थियो बाबयरोले बेल्जियम लिगमा सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी खेलाडीको लागि इबोनी जुत्ता पुरस्कार जिते।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो भिक्टर ओसिम्हेन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।